Ikhaya leeholide zanamhlanje ngaselwandle, iiyure ezi-2 ukusuka eTrondheim! - I-Airbnb
Ikhaya leeholide zanamhlanje ngaselwandle, iiyure ezi-2 ukusuka eTrondheim!
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguHåvard
Ikhaya leeholide eliyilwe ngumyili kwindawo entle eLysøya. Ipropati ineembono ezintle zolwandle. Ikhaya linomgangatho othe gqolo ophezulu.
Ikhaya line-eco-friendly Kebony kuyo yonke i-facade.
Lo mmandla waziwa ngommandla wasendle kunye nobuhle obuselunxwemeni. Iindawo zolwandle ngaphandle zizityebi kwiintlanzi kunye neeshellfish, zilungele ukuloba okanye ukuntywila. Apha unokubona ukutshona kwelanga phezu kolwandle kunye ne-Adsen lighthouse kwi-silhouette.
Imiphezulu yeglasi enkulu, kunye nemibono emangalisayo. Ukuba unethamsanqa, ubona izibane zasemantla zidanisa.
Indlu yolwandle e-eco-friendly eneendawo zokuhlala ezijikeleze yonke i-cottage. Ibhafu eshushu eyenziwe ngamaplanga. Iimbono ezimangalisayo, ukuba unethamsanqa uyakubona izibane zasemantla zidanisa kwisibhakabhaka esineenkwenkwezi.
Apha ungafumana uxolo, kwaye ukonwabele okona kulungileyo kwendalo yaseNorway kunye namava.
4.91 out of 5 stars from 71 reviews
4.91 · Izimvo eziyi-71
Imbonakalo yonxweme yasendle nentle, ilungele ukuloba kunye nokuntywila kunye nokuqubha kunye nolonwabo lwaselwandle kunye nabantwana. I-Lysøya yaziwa ngokutshona kwayo okuhle kunye nethuba lokubona izibane zaseMantla!
Umbuki zindwendwe ngu- Håvard
Inokuba luncedo ngokukhwela ukuya nokubuya eLysøya ukusuka kumbindi wesixeko saseTrondheim okanye kwisikhululo seenqwelomoya saseVærnes.
T / R Trondheim Sentrum: 2500 Kroner
T / R Værnes Airport: 3500 NOK
Ubuninzi be-4 abantu + imithwalo.
Namathuba okufikelela eLysøya ngezithuthi zikawonke-wonke nokuba ngolwandle okanye ngendlela.
T / R Trondheim Sentrum: 2500 Kr…